Semalt: सामग्री मार्केटिंग रणनीति बनाउँदा तपाइँले के ध्यान दिनुपर्छ
धेरै उद्यमीहरू यसको प्रस्ताव गतिविधि को कारण मार्केटिंग रणनीति को रूप मा इन्टरनेट छनौट। एसईओ र एसएमएम जस्ता डिजिटल मार्केटिंग टेक्निकको साथ, व्यवसायहरूले अनलाइन एक्सपोजर बढाउन सक्दछ। यहाँ कुनै पनि घटनाको अभिन्न हिस्सा सामग्री मार्केटिंग हो। त्यसकारण, धेरै व्यवसायहरूले उनीहरूको सामग्री मार्केटि strate रणनीतिहरूलाई दिगो बनाएर ठूलठूला फाइदा गरेका छन्। यसले ग्राहकहरूको निरन्तर प्रवाह ल्याउँछ र प्राथमिक लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ - रूपान्तरण।
Semalt डिजिटल सेवाहरु का ग्राहक सफलता प्रबन्धक ज्याक मिलर वर्णन गर्दछ कसरी बिभिन्न विपणन उद्देश्यहरु लाई सेवा पुर्‍याउन सामग्री बनाउने।
१ लक्षित समाचारपत्रहरू
एसएमएम र ईमेल मार्केटिंग केहि उल्लेखनीय प्रक्रियाहरू अपनाइनेछन् जब यो अनलाईन मार्केटिंगको कुरा आउँदछ। यसले तपाईंलाई ईमेलहरू संकलन गर्न अनुमति दिन्छ जबकि तपाईंको ग्राहकहरूको लागि यो प्रक्रिया सहज राख्दछ। धेरै वेबसाइटहरू अनलाइन मार्केटिंगमा सफल छन् न्यूजलेटरहरू र ईमेलहरू पठाउनको स्थिरतालाई जुन मानिसहरूले तपाईंको कम्पनीको ब्रान्ड छवि सम्झने तरीकामा सुधार गर्दछ। यस प्रविधीले लक्षित विज्ञापन मार्फत राम्रो परिणाम दिन सक्छ, इन्टरनेटमा असंख्य SEO स्वचालित टेक्नोलोजीलाई धन्यवाद।
२. प्रभावित मार्केटिंग
धेरै जसो केसहरूमा, व्यक्तिहरू अनौंठा स्टोरहरूमा विश्वास गर्दैनन्, तिनीहरूको अनलाइन काम कत्तिको वैध छ भन्ने कुरालाई फरक पार्दैन। प्रभावित मार्केटिंग राम्रो स्थापना भएको व्यापारी वा विक्रेताबाट बिक्री अनुरोध गर्नको लागि उत्कृष्ट प्रविधि हुन सक्छ। यस प्रक्रियालाई सफल बनाउनका लागि बौद्धिक प्रविधिहरूले ह्यासट्यागहरू वा अतिथि पोष्टिंग जस्ता सामाजिक मिडिया ट्रिक्सहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। यस विधिमा उनीहरूको साइटमा तपाईंको सामग्री प्रकाशित गर्न पहिले नै सेट अप गरिएको अर्को वेबसाइट अनुरोध गर्ने समावेश हुन सक्छ। यी विधिहरूले तपाइँको ठाउँ मा अन्य स्थापित साइटहरु बाट तपाइँको ग्राहकहरु लाई पनी काम गर्दछ।
Meaning. अर्थपूर्ण मेट्रिक्स
एनालिटिक्सले कुनै पनि अनलाइन मार्केटि strategy रणनीति रणनीति र सफलतातर्फ प्रगतिलाई दर्जी गर्दछ। Google AdWords र विश्लेषकहरू जस्ता SEO स्वचालित उपकरणहरूबाट मेट्रिक्स प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यी संख्याहरूले अर्थपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ जस्तै तपाईंको अभियानको लागि बिक्री, सम्भावित ग्राहकहरू, सामाजिक मिडिया साझेदारी।
Her. हीरो छवि
हामीमध्ये धेरैजसो दृश्यात्मक रूपमा निर्देशित हुन्छौं। मानव दिमागले चीजहरूलाई चित्रको रूपमा बोलाउँदछ। नतिजाको रूपमा, अनलाइन सामग्रीले उनीहरूको मनसाय उद्देश्यको लागि एक दृश्य अपील प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। तपाईं वेब विकासको धेरै पक्षहरूमा यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले उत्पादको सन्दर्भमा प्रतीकात्मक तस्वीर प्रयोग गर्न, पाठमा चित्रहरू साथै उल्लेखनीय लोगो समावेश गर्न सक्दछ। ब्रान्डि Inमा, व्यक्तिहरू कम्पनी छविलाई यसको नामको साथ जोड्दछन्।
प्रत्येक अनलाइन व्यवसायलाई नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्न निश्चित तरीका चाहिन्छ। नतिजाको रूपमा, इन्टरनेट मार्केटर्सले सामग्री मार्केटिंग जस्ता विधिहरू प्रयोग गर्दछ जुन आम जनता बीच ठोस ब्रान्ड उपस्थिति ल्याउँदछ। तपाइँको सामग्री मार्केटिंग, ब्रान्ड सचेतना अभियानहरू राम्रोसँग मूल्या to्कन गर्न तपाईंले विशेष परिवर्तनहरू गर्न आवश्यक पर्दछ। यो एसईओ विधिहरू मध्ये एक हो र निकट सम्बन्धित रणनीतिसँग केहि उपयोगी जानकारी साझा गर्दछ; सामाजिक मिडिया मार्केटिंग। यस विधिले बुलेट-प्रूफ विधि प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको ट्राफिकमा रूपान्तरणको साथै सामग्री क्याप्चर गर्दछ। माथिको सुझावहरूले तपाईंको सामग्री मार्केटिंग रणनीति ठीक गर्न सक्छ र तपाईंको अनलाइन मार्केटि campaigns अभियानहरू सफल बनाउन मद्दत गर्दछ।